SAWIRRO: Xiddigaha leh Doomaha Raaxada ee ugu qaalisan….(Messi oo Boorka ku reebay, Ronaldo, Beckham, Rooney iyo..) – Gool FM
SAWIRRO: Xiddigaha leh Doomaha Raaxada ee ugu qaalisan….(Messi oo Boorka ku reebay, Ronaldo, Beckham, Rooney iyo..)
(Europe) 13 Feb 2018. Marka la fiiriyo Mushaarka ay usbuuciiba jeebka ku shubtaan xiddigaha waa wayn ee Yurub la yaab ma noqoneyso inay Malaayiin ku qarash gareeyaan baabuurta, dayuuradaha gaarka ah iyo waliba doomaha raaxada.
Haddaba haddii Messi maaro loogu heli la’yahay kubbada cagta oo ay dadka qaar ku sheegaan inuuba yahay kii ugu fiicnaa abid ayaa misane hogaaminaya Liiska xiddigaha leh Doomaha raaxada ee ugu qaalisan.
Aqriso 5-ta Laacib ee leh Doomaha Raaxada ee ugu qaalisan Kubbada Cagta:
Nuuca Doontiisa waxaa lagu magacaabaa Pershing 90.
Qiimaha ay ku fadhiso waa: 3-milyan oo bound
Waxay leedahay 5-qol oo Jiif iyo 5-qol oo Qubeys waxayna marti galineysaa Sideed Ruux.
Nuuca Doontiisa waa Horizon E88
Qiimaha ay ku fadhiso waa: 3.8 milyan oo bound
Waxay leedahay afar Qol oo Jiif sidoo kale labo qol oo kale.
Nuuca Doonidiisu waa Fairline Squadron 78
Qiimaha ay ku kaceyso waa 4.8 milyan oo bound
Wuxuu soo iibsaday maalmo yar ka hor inta uusan ciyaarin Finalkii Champions league ee 2017.
Saaxiibadiisa Real Madrid Luca Modric iyo Lucas Vazquez ayaa xitaa kula baashaalay doonida ka hor kulankooda Final ka mar ay ku raaxeysanayeen Ibiza.
Nuuca Doonidiisu waa Palmer Johnson Ascari
Qiimaha ay ku fadhiso waa: 7.5 milyan oo bound.
Doonidan sagaalka qof marti galin karta ayaa waxay Leedahay Qol VIP uu Ronaldo ka dego markuu doonida ku safrayo ama ku baashaalayo.
Nuuca Doonidiisu waa Maiora Seven C
Qiimaha ay ku fadhiso waa: 10 milyan oo bound.
Messi ayaa aad u jecel dhul xeebeedka Ibiza isagoona badenaa ugu safrka doonidiisa Maiora Seven C.
Doonida xiddiga reer Argentina ayaa sidoo kale leh qof VIP oo isagu ku raaxeysto iyadoona leh adeegyo kale oo badan.
Koox lagu ganaaxey weerar jallaato loo adeegsadey! (Sidee wax u dheceen?)